Wasakhda Gawaarida Gawaarida Gawaarida Qashinka & Uumiga Saxarada Gaaban | YiZheng
Ku Bacriminta taagan Haanta halsano inta badan loo isticmaalaa in lagu rogo oo lagu qaso qashinka dabiiciga ah sida digada xoolaha, qashinka haraaga ah, dhoobada miiraha sonkorta, cuntada xun iyo balka hadhaaga cawska iyo qashinka kale ee dabiiciga u ah halsano. Mashiinka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshad bacriminta dabiiciga ah, warshadda qashin qubka ah, dhirta beeraha, halsano laba jibbaar spore iyo saarista hawlgalka biyaha.
Mashiinka waxaa lagu qallajin karaa 24 saacadood, oo daboolaya aag 10-30m2 ah. Ma jiro wax wasakheyn ah qaadashada halsano halsano. Waxaa lagu hagaajin karaa 80-100 temperature heerkulka sare si looga takhaluso cayayaanka iyo ugxanteeda gebi ahaanba. Waxaan soo saari karnaa dan-yarka 5-50m3 awood kaladuwan, qaabab kala duwan (jiif ama toosan) haan halsano.
Waa Maxay Haanta Gaaban ee Qashinka & Digada?
Haanta Gawaarida Qashinka & Digada wuxuu leeyahay astaamaha xilliga halsano gaagaaban, daboolaya aag yar iyo bey'ad saaxiibtinimo. Taangiga hawo-mareenka aerobic-ka ee xiran wuxuu ka kooban yahay sagaal nidaam: nidaamka quudinta, aaladda silo, nidaamka hawo-qaadista, nidaamka hawo-gelinta, nidaamka soo-saarista, qiiqa iyo nidaamka uumiga, guddiga iyo nidaamka xakamaynta elektarooniga ah. Xoolaha iyo digada digaaga ayaa loo soo jeedinayaa in lagu daro qadar yar oo ka mid ah kuwa wax cuna sida caws iyo maadada microbial sida ku xusan qoyaanka iyo qiimaha kuleylka. Nidaamka quudinta waxaa lagu shubayaa aaladda silo, saxarada saxaradana waxaa ka xanaajiya boodhadhka qalabka wadista si loo sameeyo xaalad kacsan oo joogto ah. Isla mar ahaantaana, aeration iyo aaladaha soo-kabashada kuleylka ee qalabka waxay bixiyaan hawo kulul oo qallalan oo loogu talagalay astaamaha qalabka hawada. Meel hawo kulul oo isku mid ah ayaa laga sameeyay dhabarka dambe ee daabka, kaas oo si buuxda ula xiriiraya sheyga loogu talagalay bixinta oksijiinta iyo wareejinta kuleylka, qoyaanka iyo hawo bixinta. Hawada ayaa la ururiyaa oo laga daweeyaa salka silo hoose iyada oo loo marayo xargaha. Heerkulka taangiga inta lagu jiro halsano wuxuu gaari karaa 65-83 ° C, taas oo hubin karta dilka cudurada kala duwan. Qoyaanka maaddada ee halsano kadib halsano waa qiyaastii 35%, iyo badeecada ugu dambeysa waa amaan iyo bacrimin dabiici ah oo bacrimin ah. Fal-bixiyuhu waa mid xiran oo dhan. Ka dib marka urta laga soo ururiyo dhuumaha sare, waa la dhaqaa oo la nadiifiyaa iyadoo lagu buufiyo biyaha oo lagu sii daayo heerka. Waa jiil cusub oo taangiga bacriminta dabiiciga ah oo ku habboon gobollada kala duwan, kuna saleysan qalabka la midka ah iyo hagaajinta iyo casriyeynta. Heer teknolojiyad heer sare ah oo ay doorteen suuqa intiisa badani.
Waa maxay Haanta Gawaarida Qashinka & Digada Gawaarida Loo Isticmaalay?
Qalabka taangiga qashinka ah ee qashinka & digada ayaa loo isticmaali karaa daaweynta digada doofaarka, digada digaaga, digada lo'da, digada adhiga, qashinka boqoshaada, qashinka dawada Shiinaha, cawska dalagga iyo qashinka kale ee dabiiciga ah.
2. Waxay u baahan tahay oo keliya 10 saacadood si loo dhammaystiro habka daaweynta ee aan waxyeellada lahayn, taas oo leh faa'iidooyinka daboolaya wax ka yar (mashiinka halsano wuxuu daboolayaa oo keliya aagga 10-30 mitir murabac).
3. Waa doorashada ugu fiican ee lagu xaqiijin karo ka faa'iideysiga kheyraadka agabyada qashinka ee shirkadaha beeraha, beeraha wareega, beeraha bey'ada.
4. Intaa waxaa dheer, sida ku xusan shuruudaha macaamiisha, waxaan u habeyn karnaa 50-150m3 awood kala duwan iyo qaabab kala duwan (jiif ah, toosan) taangiga halsano.
5. In geeddi socodka halsano, aeration, xakamaynta heerkulka, kacsiga iyo deodorization si toos ah loo xakameyn karaa.
Astaamaha Haanta Qashinka & Uumiga Gawaarida
1. Nadiifinta CIP-ka iyo nadiifinta SIP-ka (121 ° C / 0.1MPa);
2. Marka loo eego shuruudaha nadaafadda, qaabeynta qaabdhismeedku waa mid aad u dadnimo badan oo hawl fudud.
3. Isudheellitir habboon oo u dhexeeya dhexroorka iyo dhererka; iyadoo loo eegayo baahida loo qabo in la habeeyo qalabka isku dhafka ah, sidaas darteed keydinta tamarta, kicinta, saameynta halsano waa wanaagsan tahay.
4. Taangiga gudihiisa wuxuu leeyahay daaweyn dusha sare leh (roughness Ra wuxuu ka yaryahay 0.4 mm). Meel kasta oo laga baxo, muraayad, god daloolo iwm.
Faa'iidooyinka Haamaha Gawaarida Qashinka & Digada Gawaarida
•Naqshad toosan oo qaadaysa meel yar oo bannaan
•Xidhitaanka ama xirida halsano, wax ur ah hawada
•Codsi balaaran oo loogu talagalay magaalada / nolosha / cuntada / beerta / wasakhda wasakhda wasakhda
•Kuleylinta korontada si loogu wareejiyo saliida suufka kuleylka kuleylka
•Inner wuxuu noqon karaa saxan bir ah oo aan laheyn oo dhumucdiisu tahay 4-8mm
•Iyada oo la daboolayo jaakadda lakabka si loo hagaajiyo heerkulka nafaqeynta
•Iyada oo leh kabadhada awoodda si ay u xakameyso heerkulka si toos ah
•Isticmaal sahlan oo dayactir ah oo gaari kara is-nadiifin
•Mashiinka isku-darka suufku wuxuu gaari karaa dhammaystir buuxa oo buuxa isku-darka iyo qalabka isku-darka
Hore: Double Ku marooji Composting Turner
Xiga: Nooc Forklift ah Qalabka Bacriminta
Hordhac Waa maxay Mashiinka Labaad ee lagu maroojiyo Isukeenista? Jiilka cusub ee Double Screw Composting Turner Mashiinka ayaa hagaajiyay dhaqdhaqaaqa wareegga wareegga labalaabka, sidaas darteed wuxuu leeyahay shaqada leexashada, isku darka iyo oksijiinta, hagaajinta heerka halsano, si dhakhso ah u burburaya, ka hortagga sameynta urta, badbaadinta ...
Qaadista Haydarooliga Qaadista Turner
Hordhac Muxuu yahay Mashiinka Wareejiya Kaydinta Qashinka Haydarooliga? Mashiinka Kumbiyuutarka Qashinka ee Kombiyuutarka Haydarooliga wuxuu nuugaa faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda wax soo saarka horumarsan ee gudaha iyo dibaddaba. Waxay si buuxda uga faa'iideysaneysaa natiijooyinka cilmi-baarista ee farsamada sare ee bayotechnoolajiyadda. Qalabku wuxuu isku daraa makaanikada, korontada iyo hydrauli ...
Saxan silsilad Compost Turning
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Daabacaa Cunnooyinka Saxanka ah? Mashiinka Mashiinka Daabacaya ee Chain Plate wuxuu leeyahay naqshad macquul ah, isticmaalka tamarta oo yar ee mootada, soosaarida qalabka wejiga adag ee wanaagsan ee gudbinta, qeylada hoose iyo waxtarka sare. Qaybaha muhiimka ah sida: Silsilad adeegsaneysa qaybo tayo sare leh oo waara. Nidaamka Haydarooliga waxaa loo isticmaalaa qaadista ...